Wakaaladda socdaalka oo aan dabagaleeyn sheekooyinka been abuurka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sumadda hayadda socdaalka. sawir: Nils Lindström/Sveriges Radio
Wakaaladda socdaalka oo aan dabagaleeyn sheekooyinka been abuurka
La cusbooneeyay tisdag 12 december 2017 kl 14.02
La daabacay tisdag 12 december 2017 kl 12.59
Wakaaladda socdaalka ayaan lahayn nidaam ay daba-gal ugu sameeyso tuhunnada laga qabo sheekooyinka been abuurka qaxootigu isku dhiibaan ee la iibsado, balse uu dhanka kale ku sheegay inuu falkaasi yahay mid halis ah madaxa laanta saxaafadda ee wakaaladda socdaalka Fredrik Bengtsson.
–Xaqiiqdii, waa xaalad halis ah oo aan wanaagsanayn. Mar walba waa halis haddii ay soo baxdo in sheekooyin aan dhab ahayn lagu heley sharci deggenaansho, sida uu sheegay Fredrik Bengtsson.
Sheekooyin la soo dhoodhoobey oo la xiriira habka qaxa loo soo galey oo aan dhab aheyn ayaa si furan oo aan dahsoonayn loogu xayeeysiiyaa bogag ka mid ah shaashadaha internet-ka, sida ay baaris ku ogaatay laanta wararka ee ekot. Sheekooyinkan oo dadyoowga ka dambeeya ku iibiyaan lacag ayey ku sheegaan iney ku caawineyaan sidii hab aan sharci aheyn looga heli lahaa Sweden deggenaansho.
Qaarkood waxaa howlahaa lagu guda jirey sanooyin badan, mana ahan mid ka fajacineeysa madaxa laanta saxaafadda ee wakaaladda socdaalka Fredrik Bengtsson.
–May, maahan mid iga fajacineeysa, maadaama ey falalka noocani yihiin suuq soo jiidasho leh iyo dhammaan wixii lacag lagu heli karo ama lagaga faa’iideey-san karo baahida iyo welwelka dadyoow dooneya sidii ey nolol midda ey ku jiraan ka wanaag-san ku heli lahaayeen, waxaa mar walba ka dhalan kara dadyoow isku daya sidii ey uga macaashi lahaayeen.
–Arrinkani maaha mid u yaala wakaaladda socdaalka ee waa howl ay leedahay hayadda ammaanku, sida uu sheegay Fredrik Bengtsson.
Halka uu ciidanka ammaanku dhankiisa sheegay inay tahay wakaaladda socdaalka hayadda ay ugu sahlan tahay inay sida ugu wanaag-san wax uga ogaadaan. Hayadaha ayaan maanta wax fikir ah ka qabin baaxadda ka ganacsiga sheekooyinka been abuurka ah.
Waxay wax u dhimeeysaa is aaminka
–Falalka noocan oo kale waa kuwo dhaawacaya dhammaan aaminaadda, haddii ay soo baxdo iney jiraan been abuur laga macaasho ama yaan laga macaashine, sida ay sheegtay Charlotta Lagnander, ahna gar-yaqaan dhanka shuruucda soo-galootiga oo ka howl-gasha guddi-qarameedka talada ee kooxda soo-galootiga Flyktinggruppernas riksråd.
Charlotta Lagnander waxay carrabka ku adkeeysay iney qaxootiga badankii ey ku dalbadaan sharciga deggenaansho iyo magan-gelyo doon xaaladihii dhabta ahaa oo ey soo mareen. Balse uu ganacsiga noocan ahi dhaawacayo.
–Waxaa kor u kacaya tuhunka howl-wadeennada go’aannada ka gaara dalabyada magan-gelyo doonka. Middaasina oo saameeyn ku yeelaneeysa sidii lagu heli lahaa sharci deggenaansho, sida ay sheegtay Lagnander.
Dhanka kale Charlotta Lagnander ayaa sheegtay in aanay la yaabin inuu dalka ka jiro ganacsi noocaasi ah.
–Waxaa mar walba jira dadyoow ka faa’iideeysta baahida ama tabar-darrida dadka kale. Waana tusaale midkani, sida ay sheegtay.
Shirkado la kashifay oo la sheegey iney sheekooyin been ah ka iibiyaan qaxooti